Suldaan ka goostay Somaliland oo maleeshiyaad uruursaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Mid ka mid ah salaadiinta gobolka Awdal ee deegaanada Somaliland ayaa ku dhawaaqay inuu ka goostay maamulkaas, wuxuuna maleeshiyaad ku uruursaday xadka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Suldaankaan oo lagu magacaabo, Suldaan Abibakar Cilmi Wabar ayaa markii uu ka goostay maamulka waxaa ciidamo ka dabadiray Somaliland.
Hadaba waxgrad kasoo jeeda gobolka Awdal ayaa xukuumadda maamulka Somaliland ku dhaliilay iney fashilisay qorshe suldaanka lagula soo celin lahaa Somaliland.
Waxay sheegeen inaanay jirin wax dhibaato ah oo nabad galyada khalkhal galinaysa oo dhacay, islamarkaana xukuumaddu ciidan dul dhigtay iyagoo wada hadal kula jira Suldaanka.
“Dhanka nabadgalyada dhawr iyo labaatankaas sano wax is hirdiyaa kamay soo bixin laakiin, hadal ka soo baxay Suldaanku kuma gadna in intaas oo cidan ah la keeno, laguna cabsigeliyo caruurta, oo lagu cabsi galiyo beelaha.” ayaa ka mid ahaa hadalka Madaxdhaqameedka.
Madax dhaqameedkan reer Awdal siiba ka soo jeeda Beesha Jibriil Yoonis ee Suldaan Wabar ayaa soo jeediyay in arintan loo daayo Hay’addaha ay khusayso iyo madaxda dhaqanka
“Waxa jira golayaal iyo guurti ay shaqadeeda tahay, waxaa jira Salaadiin, Culimo ayaa jirta, Ciidan ma oolin meesha, waxaa tagay Guurtidii iyo Suldaanadii oo yiri Suldaan Eraygan may kula qabaan Suldaanadii aad ka mid ahayd anagoo joogna geedkii waxbana isla diidin oo Magaalo Ciidamadii dawladdu joogana joogna ayaa Ciidamadaas la keenay” ayay sheegeen.
Salaadiinta ka hadashay Shirkan Jaraa’id ayaa sheegay in iyagoo Suldaan Abiibakar ka soo kexeeyay Meel xuduudka Somaliland ka talawsan oo Kilalka shanaad ah islamarkaana keenay Degaanka Qol-ujeed ee Degaanka Somaliland ah Xukumaddu halkaasi Ciidamo gaysay “Anaka oo nidhi waar bal ka kaalay dhinacaa Itoobiya ee aad joogto oo uu yidhi Maxaa jira? Dabeed waxaan nidhi waar bal kaalay waa dadkaagii waxan aad dhex joogtaaye.
Salaaddiinta ayaa ka digay in ciidankaasi keeni karo in bulshadu kacdo islamarkaana loo baahan yahay in wada xaajood iyo in Guurtida iyo waxgaradka degaanka loo diro Suldaanka hadalku ka soo yeeray.